Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း)
Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cefuroxime ဆိုတာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ဘတ်တီးရီးယားရောဂါတွေအတွက် အသုံးပြုတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ တချို့သောခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီနဲ့ ခွဲစိတ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ရောဂါပိုးဝင်မှုကို ကာကွယ်ရန်သုံးလို့ရပါတယ်။ Cephalosporin လို့ခေါ်တဲ့ အုပ်စုထဲမှာပါပြီး ဘတ်တီးရီးယားများကြီးထွားမှုကို တားဆီးပေးပါတယ်။
Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပေးသူ ညွှန်းတဲ့အတိုင်းသောက်ပါ။ သိလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ညွှန်းဆိုသည့်အတိုင်းသာသောက်သင့်ပြီး ပိုသောက်ခြင်း၊ အချိန်ပိုကြာအောင်သောက်ခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး၊ ရေးထားသောဆေးအညွှန်းအတိုင်း သေချာစွာ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
အစာနဲ့ ဒါမှမဟုတ် အစာမပါဘဲသောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးရည်ဖြစ်ပါက အစာစားပြီးမှ သောက်သင့်ပါတယ်။
ဆေးအရည်ဖြစ်ပါက တစ်ခါသောက်တိုင်း တစ်ခါဘူးကိုလှုပ်ခါပါ။ တိုင်းတာသည့်ဇွန်း၊ ခွက်တို့နဲ့ အတိအကျချိန်တွယ်သောက်ပါ။ ပမာဏမတိကျနိုင်သောကြောင့် အိမ်သုံးဇွန်းမသုံးပါနဲ့။ တိုင်းတာရန်ခွက်၊ ဇွန်းမရှိပါက ဆေးပေးသူကို မေးမြန်းပါ။
ဆေးပြားမှီဝဲနေရာမှ ဆေးရည်ပြောင်းလဲလိုက်ပါက တူညီတဲ့ပမာဏသုံးစရာမလိုပါဘူး။ ဆရာဝန်ညွှန်းဆိုတဲ့ ဆေးပုံစံ၊ ပမာဏအတိုင်းသုံးမှသာ ထိရောက်တဲ့အာနိသင် ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ညွှန်သည့်အတိုင်းတိကျစွာသောက်ပါ၊ ဆေးမကုန်ခင် လက္ခဏာများသက်သာလာပါလိမ့်မယ်။ Cefuroxime က တုပ်ကွေး၊ အအေးမိခြင်းတို့လို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရောဂါများအတွက် အာနိသင်မရှိပါဘူး။
ဆီးတွင်းသကြားဓါတ်ပမာဏစစ်သည့် စစ်ဆေးမှုကဲ့သို့ စစ်ဆေးမှုတချို့ရဲ့ရလဒ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာကြောင့် Cefuroxime မှီဝဲနေပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Cefuroxime ကဲ့သို့ ပဋိဇီဝဆေးတွေဟာ အအေးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေးဖျားခြင်းတွေလို ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းအတွက် အာနိသင်မရှိပါဘူး။ မလိုအပ်ဘဲ သောက်တဲ့အခါ အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အခါ ဆေးယဉ်ပါးသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန် ညွှန်မှသာသောက်သင့်ပါတယ်။
Cefuroxime နဲ့ဆေးမတည့်ပါက သို့မဟုတ် Cephalosporin အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ ဓါတ်မတည့်ပါက မသောက်ပါနဲ့။
ပန်နဆလင်၊ တခြားသောဓါတ်မတည့်ဆေးများရှိပါက ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ၊ ဒါမှမဟုတ်-
ထိုကဲ့သို့အခြေအနေများရှိပါက ဆေးပမာဏပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။
သောက်ရသော Cefuroxime ဆေးရည်မှာ Phenylalanine ပါနေနိုင်တာကြောင့် သင့်မှာ phenylketonuria(PKU) ဟုခေါ်သော အခြေအနေရှိပါကလည်း ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သေချာလေ့လာထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ချိန်ဆကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့သေချာအရင်တိုင်ပင်ပါ။ FDA အရတော့ ကိုယ်ဝန်သည်တွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ဆေးအမျိုးအစားမှာ B အနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။
FDA မှထုတ်ပြန်ထားသော ဆေးစာရင်းကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်-
Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တကယ်လို့ ဆေးမတည့်မှုလက္ခဏာများ- အင်ပြင်များပေါ်လာခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာ၊ လည်ချောင်းများ ရောင်ရမ်းလာခြင်း- တို့ဖြစ်ပါက ချက်ခြင်းဆေးရုံသွားပါ။
ဝမ်းလျှောခြင်း (အရည်များ သို့မဟုတ် သွေးများသွားပါက)
ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ တုပ်ကွေးကဲ့သို့ လက္ခဏာများရလျှင်
အသားရောင်ဖြူဖျော့ခြင်း၊ ဝါခြင်း၊ ဆီးအရောင်ညစ်ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အားနည်ခြင်း
ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုများပေါ်ခြင်း၊ အရေပြားလန်ခြင်း၊ အနီဖုများယားဖုများပေါက်ခြင်း
ယားဖုများပေါ်ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း
ရေငတ်ခြင်း၊ စားချင်သောက်ချင်စိတ် နည်းခြင်း၊ ဖောခြင်း၊ အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်ခြင်း
ဆီးအောင့်ခြင်း၊ ဆီးနည်းခြင်း၊ မသွားခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း
နှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်တွင် အဖြူကွက်များပေါ်ခြင်း၊ အနာပေါက်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင်အခုသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ Cefuroxime ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲစေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေတာမျိုး ဖြစ်စေကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက် ခုသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပေးသူကိုပြောပြရပါမယ်။ ဘေးကင်းဖို့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ပြချက်မရှိဘဲ ဆေးတွေရပ်လိုက်တာ၊ ပြောင်းလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cefuroxime ဟာ အစားအစာတချို့၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်တို့နဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ပြီး ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းစေတာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုများစေတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးစမသောက်ခင် ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတချို့ကို ပိုဆိုးကောင်းဆိုးတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေပြောင်းသွားတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားလုံးကို ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်-
အစာအိမ်၊ အူဆိုင်ရာပြဿနာများရှိပါက- ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်
အာဟာရချို့တဲ့ပါက – အခြေအနေပိုဆိုးစေနိုင်ပြီး၊ ဗီတာမင်-ကေ သောက်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
အသည်းရောဂါ၊ ယာယီဖြစ်စေ၊ အမြဲဖြစ်စေ- ဆေးဖယ်ပစ်နိုင်ချိန် ကြာသွားတာကြောင့် ဆေးအာနိသင်ပိုတိုးလာနိုတာကြောင့် သတိနဲ့သောက်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အဆုတ်ရောင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ဆီးအိမ်ရောင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
လျှာခင်ရောင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အဆစ်ရောင်ပိုးဝင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
Lyme Disease လိုင်းမ်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အရိုးပိုးဝင်ရောင်ရောဂါ ကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
နားအမြှေးရောင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ဝမ်းတွင်းမြှေးရောင်ရောဂါ ကုသရန် လူကြီးအတွက်
Once the patient responds clinically to parenteral therapy, cefuroxime 250 mg to 500 mg orally every 8 hours for7to 21 days may be administered. Duration of therapy is dependent upon the suspected causative organism’s sensitivity to cefuroxime.
ကျောက်ကပ်တစ်ရှူးရောင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အရေပြား သို့ တစ်ရှူးပိုးဝင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အာသီးရောင်ရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါပိုးကုသရန် လူကြီးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ကလေးတွေအတွက် Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လျှာခင်ရောင်ရောဂါကုသရန် ကလေးအတွက် ဆေးပမာဏ
အဆစ်ရောင်ပိုးဝင်ရောဂါကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အရိုးရောင်ပိုးဝင်ရောဂါကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
နားစည်မြှေးရောင်ရောဂါကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
လေပြွန်ပေါက်ရောင်ရောဂါကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အရေပြားရောင်ပိုးဝင်ရောင်ရောဂါ ကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အနာစက်ကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
အာသီးရောင်ရောဂါကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ဘတ်တီးရီးယားရောဂါကုသရန် ကလေးအတွက် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
Cefuroxime (ဆစ်ဖူရိုဆင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးရည်ထိုးဆေး-750mg, 1.5g, 7.5g
ဆေးရည်သွင်းဆေး-750mg, 1.5g, 7.5g
Drug Information Handbook. Page 386-388
Anal Cancer (စအိုကင်ဆာ)